Gite du Grand Delmas - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguClara
UClara ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Iikhilomitha ezingama-50 ukusuka eValence, ilali yaseBourdeaux, phakathi kweProvence kunye neVercors, inika umbono omangalisayo woluhlu lweCouspeau. Indawo yokuhlala yaseGrand Delmas, esecaleni kwenduli ifanelekile ukuba ihlale entliziyweni yendalo.
- Khumbula ukuthatha ilinen yakho yokulala okanye ucele iinketho zethu zelinen yelinen: 10 € / ibhedi.
- Yenza i-cottage icoceke okanye uthathe imali yethu yokucoca: 80 € / ukuhlala.
- Yiza nesilwanyana sakho: 20 € / hlala.
Kwindlela encinci ejikeleza induli, yigîte yethu "du Grand Delmas", ehlala kuhlaza oluchumileyo, kumphakamo oyi-680 m.
Le fama indala kakhulu yabalimi bamaProtestanti, ejikelezwe ngamahlathi, amadlelo kunye needaffodils zasendle ngoMeyi, okokuqala kukuhenda ngobuhle bayo bendalo.
Amehlo akho avula indawo enkulu enikelwe yona, ukusuka ekhohlo ukuya ekunene: enye yemilomo emi-3 (iVeyou), intaba yaseCouspeau emva koko uAngèle kunye neMièlandre. Sikhethe ukubiza igîte yethu ngeyona ndawo iphezulu (1544 m ngaphezu komphakamo wolwandle) yeCouspeau massif: "Le Grand Delmas". Iguqulwe yaba yindawo yokuhlala efudumeleyo nekhululekileyo, le ndlu yosapho kunye nokusingqongileyo kuya kudala nawe amaxesha amahle okwabelana, ulonwabo kunye nobuhlobo.
Uyakuxabisa ukuza nosapho okanye abahlobo ukuya kuthi ga kwi-12 yabantu (igumbi lokuhlala elingama-50 m² kumgangatho ophantsi, amagumbi okulala ama-3 anebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lokulala elikhulu elinamatrasi ama-6 omnye phantsi).
Wamkelekile kwaye wonwabe ngolonwabo kwikhaya lethu losapho.
Indlu iyodwa, embindini wendalo, ijikelezwe ngamahlathi kunye namadlelo anombono omangalisayo wentaba yaseCouspeau.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bourdeaux